एयरपोर्ट VIP लाउन्जेस कसरी पहुँच गर्ने? | यात्रा समाचार
एयरपोर्ट VIP लाउन्जेस कसरी पहुँच गर्ने?
जब यो यात्रा को कुरा आउँछ, विशेष गरी जब हामी हाम्रो गन्तव्य पुग्न एक जडान विमान को लागी छ, धेरै लामो प्रतीक्षा एक उडान को सबैभन्दा खराब अनुहार बन्न सक्छ।
यद्यपि हामी पर्खाइको घन्टाको बखत मनोरन्जन गर्ने तरिकाहरू खोज्छौं, तर यस्तो लाग्दछ कि समय बितेर जान्छ र हाम्रो शरीरले आफैलाई परम्परागत प्रतीक्षालयहरूको सीटमा समेट्दैन। यो उल्लेख नगरी कहिलेकाँही आराम गर्न बस्न खाली ठाउँ पाउन गाह्रो हुन्छ र हामीसँगैको बन्डलहरू छोड्नुहोस्।
यद्यपि एयरपोर्ट VIP लाउन्जमा चीजहरू धेरै फरक हुन्छन्। तिनीहरू सबै सुखसुविधा संग सुसज्जित छन्: नरम सोफा र सिटहरू, इन्टरनेट पहुँच, उत्तम कफिसहरूको एक राम्रो चयन ... त्यहाँ केहि छन् जुन एक कदम अगाडि जान्छन् र विस्तृत बफेहरू, विशाल एक्वैरियमहरू, फिनिश साउनास र चिकित्सा क्लिनिकहरू छन्।
तर हामी यी अतुलनीय लाउन्जहरू कसरी एयरपोर्टहरूमा पर्खने समयहरू रमाइलो गर्न सक्दछौं? पढिरहनुहोस्!
3 दिन बित्दछ
4 अलग VIP लाउन्जेस
7 VIP लाउन्जहरूमा सिधा पहुँच
8 एक वीआईपी मित्र बनाउनुहोस्
पारम्परिक प्रतीक्षा कोठाहरू बिर्सनको लागि प्राथमिकता पास उत्तम विकल्प हो र यसलाई विश्वभरका यात्रुहरूका बीचमा सबैभन्दा धेरै सामान्य कार्यक्रमहरूको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। विशेष गरी जो अक्सर यात्रा गर्छन्।
यसको साथ, तपाईं द्रुत रूपमा विश्वभर एक हजार भन्दा बढी VIP लाउन्जे पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। प्राथमिकता पास मा ग्राहकहरु को बजेट अनुसार तीन बिल्कुल भिन्न दरहरु छ।
प्रतिष्ठा: असीमित VIP कोठाहरूमा भ्रमण समावेश गर्दछ। Per 399eयुरो प्रति वर्ष लागत।
मानक प्लस: २IP oun यूरोको वार्षिक लागतको साथ VIP लाउन्जमा १० नि: शुल्क भ्रमण। थप भ्रमणहरू २ 10 यूरो खर्च।
मानक दर: यो पासको मूल्य प्रति वर्षeat युरो हुन्छ जुन तपाईले VIP कोठा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ हरेक पटक २eयूरोको शुल्क लाग्दछ।
एयरलाइन वफादारी कार्यक्रम को लागी धन्यवाद हामी सबै कम्फर्ट्सका साथ स्टपओभरहरूको मजा लिन सक्दछौं। यस तरिकाले, यदि तपाईं समान एयरलाइनको साथ धेरै यात्रा गर्नुभयो भने, सदस्य कार्डले तपाईंलाई एयरपोर्टहरूको VIP लाउन्जेहरू पहुँच गर्न अनुमति दिनेछ एक यूरो भुक्तान नगरी। उही कुरा साँचो हो यदि तपाईं व्यापार वा पहिलो श्रेणीको उडान गर्नुहुन्छ। राम्रो सुनिन्छ?
यदि तपाईं धेरै यात्रा गर्नुहुन्न तर परम्परागत प्रतीक्षा कोठामा-घण्टाको स्टपओभर भोग्न चाहनुहुन्न भने, VIP कोठाहरूमा पहुँच दिनको लागि एक दिन किन्नु उत्तम हुन्छ।
यदि तपाईं दूरदर्शी हुनुहुन्छ र तपाईं यो समयको साथ गर्नुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई २० र 20० यूरोको बीचमा खर्च गर्न सक्दछ। एक उचित मूल्य आरामदायी वातावरणमा अधिकतम आराम लिन र तपाईंको गन्तव्यमा पुग्न आराम र आराम गरीएको छ।
तपाईले यात्रा गरिरहनु भएको एयरलाइनको भिआउपी लाउन्ज पहुँच गर्नका लागि पनि यो सिफारिश गरिएको छ किनकि टिकट देखाउने समयमा यो सम्भव छ कि तपाइँले केही विशेष पदोन्नति वा छुटबाट लाभ उठाउनुहुनेछ।
अलग VIP लाउन्जेस
यात्रा गर्न धेरै कडा बजेट भएकाहरूले यो थाहा पाउनुपर्दछ कि त्यहाँ स्वतन्त्र वीआईपी लाउन्ज छन् जसमा अधिकतम लागत लगभग २० यूरो हुन्छ। यस प्रकारको सेवा प्रदान गर्ने उत्तम चेनहरू प्रीमियम ट्राभलर, प्लाजा प्रीमियम र एयरस्पेस हुन्।
तिनीहरूमा तपाईले सबै चीज फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन एयरपोर्ट VIP लाउन्जहरू: आरामदायी वातावरण, आरामदायी आर्मचेयरहरू र प्रशस्त खानाको रूपमा चित्रण गर्दछ। केवल नकारात्मक पक्ष भनेको के हो भने यी धेरै स्ट्यान्डलोन लाउन्जहरू अँध्यारो भन्दा पहिले बन्द हुन्छन्।
केही कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई वफादारी कार्डहरू दिन्छन् जुन उनीहरूलाई एयरपोर्टहरूमा यात्रा गर्दा निश्चित VIP लाउन्जहरूमा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ।
मोबाइल अनुप्रयोगहरू हाम्रा धेरै जसो समस्याहरूको समाधान हुन सक्छन्। यो लाउन्जबुड्डीको केस हो, एन्ड्रोइड र आईओएस को लागी एक अनुप्रयोग उपलब्ध छ जुन प्रत्येक एयरपोर्टमा सबै वीआईपी लाउन्जका लागि बृहत गाइड प्रदान गर्दछ।
यस अनुप्रयोगले सब भन्दा चाखलाग्दो सेवाहरू, फोटोहरू र VIP लाउन्जहरूको टिप्पणीहरू समावेश गर्दछ र ती मध्ये कुन चाहिन्छ भनेर मात्र एक क्लिकमा तपाईंको आवश्यकता र शर्तहरू सबै भन्दा राम्रो सूट गर्दछ।
VIP लाउन्जहरूमा सिधा पहुँच
अर्को विकल्प भनेको हामीले यात्रा गरिरहेको एयरलाइनको काउन्टरमा जान र टर्मिनलमा VIP लाउन्जको लागि सोध्नु हो। उही एयरपोर्टमा त्यहाँ फरक भिआइपी लाउन्जहरू हुन सक्छन् र ती सबैसँग बिभिन्न सेवाहरू र कोटीहरू छन्।
प्रविष्ट गर्न यो एक भौचर भुक्तान गर्न आवश्यक हुनेछ। यस सेवाको मूल्य VIP कोठा को श्रेणी मा निर्भर गर्दछ जुन तपाईं पहुँच गर्न चाहानुहुन्छ।
एक वीआईपी मित्र बनाउनुहोस्
अन्तिम रिसोर्ट, सबैभन्दा किफायती विकल्प र एउटालाई बढी नाक चाहिन्छ। प्रत्येक प्रथम वर्ग यात्री उनीहरूसँग एक साथीलाई अग्रिम मा उनीहरूको मनपर्ने VIP लाउन्जमा ल्याउन सक्दछन्। जो मानिसका लागि स्वभावको हुन्छन् त्यस्ता यात्रीसँग कुराकानी गर्न र आफ्नो भाग्य प्रयास गर्न सक्दछन्। तपाईं सक्षम हुनेछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » एयरपोर्ट VIP लाउन्जेस कसरी पहुँच गर्ने?
दक्षिण कोरिया भ्रमणको लागि व्यावहारिक जानकारी
Alhambra को सात तल्ला को गेट नोभेम्बर मा सार्वजनिक को लागी खुल्ला हुनेछ